I-6 enclaves yendalo yokundwendwela ngoNovemba | IBezzia
I-6 enclaves yendalo yokundwendwela ngo-Novemba
UMaria vazquez | 29/09/2021 10:00 | Ukuzonwabisa, Uhambo
Naliphi na ixesha lonyaka kulungile ukutyelela iindawo zendalo esizicebisayo namhlanje, kodwa ezi bafumana umlingo okhethekileyo ngexesha lokuwa. Nokuba kungumbala ofunyanwa ngamagqabi emithi okanye ngendlela ekhula ngayo imisinga yamanzi, u-Okthobha no-Novemba baziswa njengezona nyanga zilungileyo ukubaleka okanye ukhenketho ubophelelekile kwezi ndawo. Kodwa zintoni ezo?
1 I-Castañar evela ku-El Tiemblo
2 ILobos River Canyon Natural Park
3 Ipaki yendalo yommandla wentaba-mlilo eLa Garrotxa
4 Umzila wemithi yeminquma yekhulu leMartos
5 ISalto del Nervión
6 Intlambo yaseAmbroz
I-Castañar evela ku-El Tiemblo
Ubeko lwe-El Castañar de el Tiemblo le ndawo ikuvumela ukuba uphonononge kwaye wazi Elinye lawona mahlathi mahle kwaye ahlukile ukusuka kwimimandla yeValle del Alberche kunye neTierra de Pinares yaseCastilla y León. Ifunyanwa kwiikhilomitha ezingama-90 ukusuka eMadrid, iba yeyona ndlela ilungileyo yohambo. Kakhulu kangangokuba kwiminyaka ethile kuthintelwe ukwenziwa ukuthintela ukugqithisa ngaphezulu kweenyanga zika-Okthobha no-Novemba.
Ngaphandle kwexesha, umbala wale ndawo yendalo inokuthi ingabeki kodwa iseyindawo yokuqhawula kwisixeko. Unokufumana kule ndawo iindlela ezahlukeneyo onokuzonwabela wedwa okanye nosapho, nangona kunjalo, i-chestnut grove yase-El Tiemblo yeyona ithandwayo. Yinto enye Ikhilomitha ejikelezayo eyi-4,4 eqala kwindawo yolonwabo i-El Regajo kwaye isiya ngakwiminyaka eli-500 yomthi we-chestnut «El abuelo», umthi omkhulu we-chestnut weminyaka elikhulu, ongaphezulu kweminyaka engama-XNUMX ubudala. Indlela iphantse yathi tyaba kwaye yahlelwa ngokulula, ke ilungele ukuhamba nabantwana okanye abantu abanokuhamba okuncinci.
ILobos River Canyon Natural Park
ICañón del Río Lobos Natural Park yi Indawo ekhuselweyo yendalo yaseCastilla y León. Ibandakanya indawo engaphezulu kwe-10.000 yeehektare phakathi kwamaphondo aseBurgos naseSoria kwaye imile ngokuma kwayo okumangalisayo okuchongwe ngokuhamba kwexesha ngamanzi oMlambo iLobos, indawo entle yeTemplar yeSan Bartolomé, kunye nekholoni yayo ebalulekileyo yegriffon amaxhalanga.
Epakini yendalo kukho iindlela ezahlukeneyo eziphawulwe kakuhle ezikuvumela ukuba wazi imihlaba eyahlukeneyo kunye neenkqubo zezinto eziphilayo. Eyona nto ifikelelekayo kwaye iqhelekileyo yile hamba uye kwimvelaphi yeSan Bartolomé. Ukusuka kwindawo yokupaka iimoto iValdecea kukho malunga neemitha ezili-1000 ukuya kwi-esplanade ye-hermitage, kwaye ukwenza le ndlela uneendlela ezimbini onokukhetha kuzo. Ungayilandela iNdlela yoMlambo, ebandakanya ukoyisa ubunzima obuncinci njengokuwela umlambo xa unyathela amatye, okanye ukuqhubeka nomkhondo wehlathi, uhambo olunokwenziwa nokuba uneembadada kunye neenqwelo zabantwana.
Nawe unayo Iindlela ezinde ezihamba ngeCanyon iyonke. Akukho namnye ozisa ubunzima obukhulu ngaphaya kwesidingo sokweyisa ukunyuka okanye ukuwela uMlambo iChico, oqhele ukoma kodwa ube ngumqobo kwixesha leemvula. Njengakwimithunzi yeendawo zendalo, ukuqala kokujonga iimeko kunye neziko lolwazi labakhenkethi kubalulekile ukunqanda isimanga.
Ipaki yendalo yommandla wentaba-mlilo eLa Garrotxa
Idityaniswe ngaphezulu kwe- Iicones zentaba-mlilo ezingamashumi amane kunye nokuhamba mlilo okungamashumi amabini, Le paki inexabiso elikhulu lendalo. Ime kwingingqi yeGarrotxa, eGirona, ubume bayo, umhlaba kunye nemozulu ibonelela ngezityalo ezahlukileyo, zihlala zonwabile, kunye neholm oki, oki kunye namahlathi e-beech exabiso elikhethekileyo lomhlaba.
Enye yezona ndawo zinkulu zendalo kuzo zonke esizicebisayo namhlanje. Ibe Iindlela ezingama-25 zabahambi ngeenyawo zobude obahlukeneyo nobunzima obudlula kwezona ndawo zinomdla kwiNdalo yeNdalo. Ngaphakathi epakini unokundwendwela i-hermitage ngaphakathi kwe-volcano yaseSanta Margarita, indawo yemyuziyam yeCoscat okanye idolophu yakudala yaseSant Pau. Uya kuyidinga impelaveki ukuze uyixabise yonke.
Umzila wemithi yeminquma yekhulu leMartos
Indawo yeminquma yaseMartos imi eJaén, kumasipala wegama elifanayo, elikhuselwe liLitye lalo, libabonelela ngemozulu encinci yomhlaba kunye nomhlaba ochumileyo. Ngaphezulu kwama-20.000 XNUMX eehektare zommandla kamasipala wayo boyisiwe kukwenza into eyodwa kumnquma womthi womnquma kwaye, ngakumbi, bubuhle bendalo imithi yeminquma yekhulu elikhulu.
Indlela yeminquma yekhulu leminyaka igubungela ummandla weehektare ezingama-84, kunye nemithi engama-5.394 60 xa iyonke, eminye yayo, yimifanekiso eqingqiweyo yokwenyani. Ngaphezulu kwama-200% ezi zinto zingaphezulu kweminyaka engama-XNUMX, nangona isiko lomlomo libonakalisile ukuba iminquma ye Indawo yeLlano de Motril bangaphezulu kwesiqingatha senkulungwane ubudala.
I-enclave ibekwe ngaphezulu kwekhilomitha ukusuka kumbindi wedolophu yaseMarteño, ecaleni kwendlela edibanisa iMartos neSantiago de Calatrava (J-213). Kwikhilomitha 1,3 uyakufumana isibonakaliso sokuqala seMithi yeMinquma ye-Centennial kwaye, nje ukuba ugqithe kwizakhiwo ezithile zezolimo, uyakufumana isibonakaliso sesibini.
ISalto del Nervión
Kumda ophakathi kweBurgos kunye neLizwe laseBasque yi Ingxangxasi ephezulu yamanzi usingasiqithi: Ingxangxasi yeNervión. Le mpompo inkulu yeemitha ezingama-270 zobude obuseMonte de Santiago yindawo ekhuselweyo, ngumbono wendalo esingenakusoloko siwonwabela.
Ubuhle beSalto del Nervión bulele emanzini kodwa kuphela kwiinyanga ezimbini kuphela ngonyaka esinokucinga ngale ndlela. Xa usebenza kwindawo yekarst, ayisoloko inamanzi kuba iyahamba kwaye iqukuqela emazantsi e-Delica canyon. Ke ngoko kuyacetyiswa Yindwendwele emva kweentsuku zemvula ezinkulu, isaqhwithi esikhulu okanye unyibilike.
Zintathu iindlela zokonwabela ingxangxasi yeNervión. Ukusuka eBurgos unokufikelela kakhulu ilula kwaye ilungele ukwenza nabantwana. Kwiikhilomitha nje ezi-2 ngeenyawo uyakufikelela kumbono omangalisayo apho ingxangxasi enqabileyo ingabonakala ngokungxama. Enye indlela yokubona ingxangxasi yeNervión isuka encotsheni yayo yile iqala kwidolophu yase-Untzaga kwiphondo lase-Alava. Ukuba le nto ufuna ukuyenza kukuzilolonga kancinci kwaye ucinge ngeengxangxasi zeNervión kunye nayo yonke indawo emangazayo eDelika canyon ukusuka kwenye indlela, le yeyona ndlela ilungileyo.
Kwiintlambo ezisemantla eCáceres, kwi Ummandla ojikeleze iHervás, ibanjwa yonke ikwindla phakathi kuka-Okthobha no-Disemba Magic Fall, inyathelo elenza ukuba uyolo lokonwabela indalo kunye namakhubalo asezilalini ale ndawo abe nomtsalane ngakumbi. Yiyo loo nto, yenye yeendawo zendalo esikhethe ukuzityelela ngo-Novemba.
Ekwindla ngomlingo Ukubonelela ngokuphefumla ekwindla ngeendlela zebhayisekile, ukuhamba intaba, imisebenzi yamanzi kunye nogqatso lwentaba, uhlaziye izivamvo zakho ngomculo kwaye ubuyisele incasa yemveli ngeesampuli zesisu. Kungekudala uza kuba nakho ukudibana nayo yonke imisebenzi kwiwebhusayithi ye-Ambroz Valley.
Ngaba awufuni ukuya kukhenketho okanye ulungiselele uhambo lwasemaphandleni kwenye yezi ndawo zendalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Ukuzonwabisa » I-6 enclaves yendalo yokundwendwela ngo-Novemba
Ungaziphepha njani iindleko ezingalindelekanga kuqoqosho lwasekhaya
Iindlela zokusebenzisa ixesha elingakumbi njengesibini